Istaraatijiyadaha Xogta Lagu Kirey Abuurista Xayeysiiska Bulshada ee Jedi-| Martech Zone
Star Wars wuxuu qeexayaa Force sida shay wax walboo dhex mara. Darth Vader wuxuu noo sheegayaa inaanaan dhayalsan Obi-Wan wuxuu u sheegayaa Luke inuu wax walba isku xidhayo.
Markaad fiiriso warbaahinta bulshada ee xayeysiinta, waa data kaas oo isku xira wax walba, saameyn ku leh hal abuurka, dhagaystayaasha, fariimaha, waqtiga iyo waxyaabo kale oo badan. Waa kuwan casharo kooban oo kaa caawinaya inaad barato sida looga faa'iideysto xooggaas si loo dhiso ololeyaal aad u xoog badan, oo saameyn leh.
Casharka 1aad: Focus on Ujeeddooyinka Cad
Diiradaada ayaa go'aamineysa xaqiiqadaada.
Diirad saariddu waa qodobka kaliya ee ugu muhiimsan olole kasta oo guuleysta iyo feejignaan la'aan waa sababta ugu weyn ee fashilka. Ujeeddooyinka cad, la cabbiri karo ayaa muhiim ah iyagana doono go'aamiso xaqiiqadaada.
Mar alla markii aad dooratay ujeeddada ololaha, u isticmaal dhibcaha xogta boggaaga iyo kanaalada bulshada si aad u aragto haddii la gaari karo iyo in kale.
Diirada saar ujeedadaada: Ku guuleysto 1,000 cinwaanno iimayl oo rajo ah.
Dib u eeg xogta bogga: Iyada oo ku saleysan xogta hore, waxaan u aragnaa inay ku qaadaneyso 25 qof oo booqanaya foomkan inay helaan hal cinwaan e-mayl.
Go'aamiso yoolalka taraafikada webka: Haddii 25 qof = 1 cinwaan iimayl ah, waxay ku qaadanaysaa 25,000 hits boggaas si loo helo 1,000 cinwaanno emayl.
Orod xaaladaha bulshada: Inta badan barnaamijyada xayeysiiska bulshada waxay leeyihiin aalad saadaalin oo muujinaysa aragtiyo la qiyaasay, qasabno ama beddelaad. Geli miisaaniyadaada qalabkan si aad u ogaato in gaaritaanka 25,000 hits website-ka la gaari karo.
Qiimee oo hagaaji: Haddii hadafyadaadu ay la socdaan miisaaniyadaada, wey fiicantahay! Haddii ay ka hooseyso, deji ujeeddooyin macquul ah ama kordhin miisaaniyadda ololahaaga.
Casharka 2aad: Si taxaddar leh u dooro Jidkaaga
Cabsida luminta ayaa ah wadada loo maro dhinaca mugdiga ah.
Qaar badan oo suuqleyda ah ayaa sameeya go'aanno ku saleysan fikradda ah in haddii aysan u baahin xayeysiisyadooda dhagaystayaal sida ugu macquulsan, ay ku khasaari doonaan tartanka. Dhab ahaantii, helitaanka ah xaq u dhagaystayaashu waxay la mid yihiin helitaanka irbad ku jirta cowska galactic iyo xogta ayaa kaa caawin doonta inaad iyaga si kafiican oo qiimo jaban u gaarto.
Hadda waxaad badanaa fikrad ka heli doontaa dhagaystayaasha aad rabto inaad xayeysiiso, laakiin waxaad u baahan tahay inaad go'aamiso waqtiga iyo goobta ugu wanaagsan ee aad ku gaari karto iyaga. Waa tan sida loogu oggolaado xogta inay go'aan ka gaarto:
Cayaaro awooda shabakada: Shabakad kasta oo bulsheed waxay leedahay xoog gaar ah oo kuu saamaxaya inaad siyaabo kala duwan u gaadho dhagaystayaasha. Tusaale ahaan, LinkedIn, waxay ku fiican tahay bartilmaameedka cinwaanka shaqada, markaa haddii dhagaystayaashaadu ay yihiin injineerada, waxaad si fudud u dhisi kartaa dhagaystayaasha LinkedIn si aad iyaga u gaarto. Si kastaba ha noqotee, haddii ololahaagu uu diiradda saarayo tiknoolajiyad gaar ah oo injineernimo ah (dheh safarka xawaaraha iftiinka), waxaad u baahan kartaa inaad ku darto xayeysiisyada Twitter ee kuu oggolaanaya inaad beegsato iyada oo ku saleysan wadahadalka ay dadku ku leeyihiin teknolojiyaddaas maxaa yeelay waxay horay ugu hawlanaayeen mowduucan .
Xayeysiinta bulshada, cabirka falaa arrinta: Gudaha Imbaraadooriyadii Gadooday Dib ugu noqo, Yoda wuxuu si caan ah ugu sheegayaa Luukos "cabirka ma ahan”Laakiin xayeysiinta, cabirku waa wax walba. Guud ahaan marka la hadlayo, barkadaha dhagaystayaasha ee ballaadhan waxay u oggolaaneysaa shabakadda xayeysiiska bulshada inay ka xaabxaabto iyada oo loo marayo algorithm-keeda xogteeda si hufan si ay uga caawiso aqoonsiga dadka ay u badan tahay inay ka jawaabaan xayeysiiskaaga Dhagaystayaasha yaryar waxay bixiyaan xog yar oo ku saabsan algorithms-yadaas, laakiin aad ayey uga qiimo badan yihiin waxayna kaa caawin karaan inaad wax u qabato sida shirkad gaar ah ama bartilmaameedka warshadaha. Olole kastaa wuu ka duwan yahay, sidaa darteed sida ballaadhan ama yar ee shabaqa aad u tuurayso way u kala duwanaan doonaan.
Ka dhig dhagaystayaasha inay tartamaan: Waxaad haysataa fursado badan oo bartilmaameed bulsho ah oo ay ku jiraan liisaska macaamiisha jira, dhagaystayaasha kaqeybgalka iyo tirakoobka dadweynaha / danaha. Hadda halkii aad ku tiirsanaan lahayd hal markab si aad u maamusho xannibaadda suuqgeynta, socodsiin yar, dhagaystayaal bartilmaameed ah oo ka soo horjeeda midba midka kale waxaadna go'aansan kartaa midka ugu wax ku oolka ah ka dibna u wareeji jihada dambe ee ku saleysan waxqabadka.
Casharka 3aad: Ku Tiirso Xogta, Maaha Nasiib
Khibradeyda, ma jiraan wax la yiraahdo nasiib.
Jedi ayaa muuqda nasiib tababbarkooda culus iyo sida ay uga go'an tahay barashada sida loo kala garto tallaabada ay qaadayaan iyo sida ay ula jaanqaadi karaan Force jidkooda ku haga. Wixii suuq-geynta warbaahinta bulshada, xogtu waxay ka ciyaartaa isla doorka talaabo kasta oo safarkeena xayeysiinta galactic ah, oo noo suurta gelineysa inaan sameyno go'aano aqoon leh oo ku saleysan xaqiiqda, halkii nasiib.
Hadda qayb weyn oo ka mid ah ololeynta ayaa go'aaminaya waxyaabaha hal-abuurka muuqaalka iyo farriinta loo isticmaali doono si kor loogu qaado. Marar badan, tani waxay keentaa khilaafaadka shaqaalaha, laakiin xogta iyaga ayaa xaliya. Waa tan sida:
Samee saf bilow ah: Qeyb kasta oo hal abuur leh waa in ay la jaanqaaddaa heerarka sumadda, waxay ku habboon tahay waxyaabaha la dhiirrigelinayo oo loogu talagalay dhagaystayaasha loogu talagalay. Qiimee wixii hore u soo shaqeeyay si loo kala saaro waxa mustaqbalka shaqeyn doona.
Tijaabi wax walba: Inta badan, magacyadu waxay isku dayaan inay ololahooda ku wareejiyaan hal sawir iyo farriin keliya. Khatartu waxay tahay haddii ay shaqeyso, ma lihid fikrad dhab ah sababta haddii ay u guuldareysatana, ma garanaysid waxa lagu eedeeyo. Bedelkeeda, tijaabi ugu yaraan afar sawir oo muhiim ah / fiidiyowyo, afar nooc oo nuqul xayeysiis ah, saddex cinwaan iyo laba wicitaan-ficil (CTAs). Haa, tani waqti dheer ayey qaadataa in la dejiyo, laakiin waxay bixisaa xog aad u qiimo badan oo ah waxyaabaha ay ka shaqeynayaan iyo sababta.
Tayadoo wax walba: Waqti hore ayaa dhaafay maalmihii ololaha xayeysiinta bulshada ee loo dhigay-lana ilaaway. Markaad bilaabeysid, waa inaad falanqeysaa jaangooyooyin waxqabadka maalin kasta usbuuca ugu horreeya iyo ugu yaraan laba jeer usbuucii wixii intaa ka dambeeya.
Ka saar sawirada, fariimaha ama cinwaannada cinwaankoodu hooseeyo.
Miisaaniyadda u wareeji sawirrada, farriimaha ama cinwaannada cinwaannada ka sarreeya.
Haddii olole uusan si fudud u shaqeyneynin, dami, qiimee xogta iskuna day inaad hagaajiso halkii aad u oggolaan laheyd miisaaniyadaha inay dhiig baxaan.
Haddii aad wado wax badan oo qasabno ah laakiin aan cidina u beddelayn boggaaga, qiimeyn bogga soo degitaanka — tamarta iyo farriinta xayeysiintu ma soo marayaan? Foomkaagu aad buu u dheer yahay? Isbedelo samee. Tijaabo. Dib u celi ololahaaga oo arag haddii ay xallineyso arrinta.
Dhagaystayaasha oo cidhiidhi ah: Ololayaasha badankood, bartilmaameedkaaga bartilmaameedka waxaa lagu aasay koox dhagaystayaal ah oo ballaadhan (cirbaddaada ku jirta galactic haystack) waana shaqadaada inaad dadka ka saarto. Hal dariiqo oo weyn oo lagu sameeyo taas waa in lagu sifeeyo dhagaystayaashaada ku saleysan waxqabadka.
Haddii dalal ama gobollo gaar ah aysan wax jawaab ah ka bixin, ka saar barkadda dhagaystayaasha.
Haddii tira-koobyada dadweynaha qaarkood ay ka jawaabayaan qiimayaal laba jibbaar ah kan dadka kale, u beddel miisaaniyadaha si aad u taageerto.
Isticmaal dhagaystayaasha kaqeybgalka oo dhis muuqaallo muuqaal ah. Tusaale ahaan, haddii aad wado olole Facebook ah adoo adeegsanaya websaydh dib u habeyn ah, samee dhagaystayaal hawlgal ah oo matala dadka ugu firfircoon. Markaa u adeegso dhagaystayaashan si aad u dhisto dhagaystayaal muuqaal ah oo aad u sii hagaajisid natiijooyinkaaga xitaa inbadan.
Meel mugdi ah ayaynu isku aragnaa, waxoogaa aqoon ahina way iftiimaysaa jidkeenna.
Arimaha aqoonta iyo baraha bulshada Jedi, xogtu waa isha kaliya ee runta laga helo. Xusuusnow in xogta badan ee aad ka faa'iideysaneysid markaad dejineysid ololehaaga warbaahinta bulshada, ay sifiican oo saadaal ah natiijooyinkaagu noqon doonaan.
Xooguna ha lahaado markasta.
Tags: Obi Wan Kenobitayadoodiidagaallada xiddigaha